Tsiba iResume kunye neMisebenzi elungileyo | Martech Zone
NgeCawa, bendisebenza kwezinye izicwangciso zokuqalisa kwaye ndinengxoxo nawo onke amaqabane am malunga nokucaca kunye ne-Intanethi. Akunomahluko. Njengeenkokheli zeshishini, kufuneka babephambi komhlambi, kufuneka babenobukho babo, kufuneka babe neefoto phaya ezinokubonwa ngabantu. Kuya kufuneka baphume ngaphandle kweqokobhe labo lendalo lokuba ngabangenisi ukuba bafuna ukuba sifumane inkxaso-mali kwaye sifumane izixhobo.
Ukuba awuphangeli, kuya kufuneka wenze njalo.
Inkampani endiyisebenzelayo iyaqesha. Awuyi kubafumana kwindawo efanelekileyo yokusebenza kunye neenkampani ezinkulu ezigcwalisa izikhundla zokugqibela kwiifama zabo ze-cubicle. Awuyi kubafumana bekhwaza ngokusebenzisa kwakhona, nokuba kunjalo. Awuyi kubafumana bathenga indawo kwi-intanethi efunwayo ngoncedo, nokuba kunjalo.
Sifumana abagqatswa abakhulu kwinethiwekhi yoogxa bethu (kubandakanya neefemu zokubekwa) kwaye siphanda kuGoogle ukubona indlela abanokulingana ngayo Kwinkampani yemidiya yoluntu. Yinkampani enkulu. Yinkampani ekhulayo. Yinkampani enomdla.
Ngokukodwa kubasebenzi bezentengiso, tsiba isuti kwaye ubophe igama lakho phaya. Cinezela inyama kwiminyhadala yalapha, gcina ibhlog, ivolontiya ukufundisa ezinye iiklasi zabaqeqeshi bengingqi, kwaye unxibelelane nenethiwekhi yakho kwaye ubabonelele ngokukhululekileyo. Ungahlali esofeni ulinde ukukhala kwefowuni.
Ukuba bendingasebenzi, andinyanisekanga ukuba ndifuna ukusebenzela inkampani esalandela umhlambi kwaye ndonqena ukukhangela abagqatswa abafanayo kwiindawo ezifanayo ezikwi-Intanethi ababezisebenzisa kwiminyaka elishumi eyadlulayo.
Eli lixesha lakho, lithuba lakho, lokuphuma phambi kwepakethi kwaye uzenzele igama.
tags: ukuqhubaiindibano zomsebenziimisebenziLinkedInimisebenzi yokuthengisaphinda Uqalele
Mar 17, 2009 ngo-9: 49 AM
Uninzi lweentsebenzo zomsebenzi lukhangela umsebenzi ongengowezobuchwephesha okanye wekhomishini.
Mar 17, 2009 ngo-9: 51 AM
Ndidiggin 'ikhalenda ye-wpng. Ndingayongeza kwindawo yam.
Mar 17, 2009 ngo 4:44 PM
Yimakethi yabaqeshi. Ngokwesiqhelo, awungekhe uqeshe i-10% ephezulu, kuba sele benemisebenzi kwaye kufuneka babanjiswe. Kodwa namhlanje, kukho abantu abaqaqambileyo nabazibhokoxayo emsebenzini abangenawo umsebenzi. Iinkampani (ezinje ngomqeshi kaDoug Compendium) zilumkile ukuba zilindele ukuba zikwazi ukuqesha ezona zilungileyo ngaphandle kokumba.
Ukufaka isicelo somnyango emnyango wangaphambili ayisiyombono ilungileyo, kwaye ukuba ufuna umsebenzi omkhulu, kusenokwenzeka ukuba kukuchitha ixesha koluqoqosho. Ngoku ukubonisa ukuthanda kwakho kunye nobuchule ekukhangelo lomsebenzi. Abaqeshi kufanelekile ukuba basebenze baya kuyamkela imizamo yakho kwaye bakuvuze ngesikhundla esikhulu.
Inkampani ye Seo
Mar 18, 2009 ngo-8: 45 AM
Umsebenzi olungileyo ngumsebenzi nje osesikweni, konke kwenziwa ngereferensi.
Mar 18, 2009 ngo-9: 27 AM
Eli linqaku elihle, baninzi kakhulu abantu abakhukhulayo kwimisebenzi kwaye akukho nto iyifezekisayo. Ukuba abantu banokuhlala ngasemva kwaye baqonde apho baya khona ukuze baqeshwe bangangcono.
Mar 18, 2009 ngo-9: 44 AM
Kudala ndikhuthaza isidingo sokuthatha inxaxheba kwimidiya yoluntu kunye nokwakha isiseko sakho soqhakamshelwano kwi-LinkedIn nakwabanye. Kubonakala ngathi ayiyondawo inye abantu abaya kuyifumana malunga nomgqatswa kodwa kwindawo ye-1.
Khawufane ucinge ukuba sele uqhagamshele kwintengiso ekujolise kuyo, ubeke izimvo kwibhlog yeenkampani kwaye wayilandela kwi-twitter. Uya kuziva ukhululekile kolo dliwanondlebe? Mhlawumbi okona kubaluleke ngakumbi, wayenokukhululeka njani umqeshi?
Ndiyavuma uDoug, abantu abasandula ukuqala kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo kwimithombo yeendaba zentlalo ziimayile eziphambi kwabo bangenalo.
Mar 19, 2009 ngo-11: 55 AM
Kuhle ukubona ukuba ayindim ndedwa ofumana abantu abaninzi bekhangela umsebenzi kwimidiya yoluntu engenazo neeprofayili! Kubi kakhulu ukuba abanye abantu abacingi ngokukhetha umqeshi wabo ngobulumko- endaweni yoko bafuna nje ukufumana umsebenzi-nawuphi na umsebenzi.